Freshworks: Otutu Ntugharị Ntugharị Ntugharị Ntugharị na Otu Suite | Martech Zone
Na oge dijitalụ a, agha maka ohere ịzụ ahịa agbanweela n'ịntanetị. Site na otutu ndi mmadu na ntaneti, ndenye aha na ire ahia esiwo na uzo ochie ha gaa na nke ohuru ha. Ebe nrụọrụ weebụ ga-adị na egwuregwu kachasị mma ha ma leba anya na atụmatụ saịtị na ahụmịhe onye ọrụ. N'ihi ya, ebe nrụọrụ weebụ abụrụla ihe dị mkpa maka ego ụlọ ọrụ.
Nyere ọnọdụ a, ọ dị mfe ịhụ etu ntụgharị mgbanwe njikarịcha, ma ọ bụ CRO dị ka amaara ya, abụrụla ngwa agha dị mkpa na ngwa ahịa ọgbara ọhụụ ọ bụla. CRO nwere ike ime ma ọ bụ mebie ọnụnọ ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ na atụmatụ ya.
Enwere ọtụtụ ngwaọrụ CRO na ahịa. Otú ọ dị, nsogbu bụ na CRO ka na-adịghị arụ ọrụ. Evolushọn na teknụzụ egosighi n'ụzọ anyị si eme ka njikarịcha ntụgharị.
Ntughari mgbanwe ntụgharị bụ ọrụ siri ike. Nke a bụ ụdị ihe atụ:
Onye na-ere ahịa na mbụ ga-ebugo peeji ahụ na ngwá ọrụ. O nwere kọfị ma na-enyocha ozi ya ka ibe ahụ na-ebu ibu. Mgbe ahụ, na-amalite ime mgbanwe na ibe. Ma mgbe ahụ ọ ga-achọ enyemaka nke ndị otu ya iji gbanwee na weebụsaịtị ya. Ma mgbe ahụ, ọ na-eme nyocha iji chọpụta ma etinyere ihe niile dị na peeji ahụ ka ọ baara ha uru. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ ga-amalite ọzọ, site na itinye peeji ahụ, ma nwee kọfị ọzọ. N'ikwu ya n'ezoghị ọnụ, ọ ka na-agbaso usoro nke agbasoro mgbe ebubata njikarịcha weebụsaịtị - Ya mere ndị ọzọ n'ime anyị. Enweghi ohuru ohuru di na CRO, nke zuru oke.
Agbanyeghị, Freshworks nwere azịza. Freshmarketer (nke mbu Zarget) hibere na 2015 iji weta ihe ọhụrụ n'ime ụlọ ọrụ nke na-ahụbeghị ọganihu ọ bụla dị egwu na afọ na imebi ntụkwasị obi ndị ahịa na ndị mmepe iji bulie ma na-agba ọsọ ule ndị dị tupu.
Ndị ụlọ ọrụ na-achọ imeziwanye mgbanwe ntụgharị nke saịtị ha aghabere ịdabere na usoro ọgba aghara dị iche iche iji mezuo ebumnuche ha, ma zụta ọtụtụ ngwaahịa sọftụwia maka otu mkpọsa - Ihe Freshmarketer na-achọ idozi site na ịnye ọtụtụ modulu njikarịcha n'otu ngwaahịa sọftụwia. , si otú ahụ wepụ mkpa ọ dị ile anya n'ihu iji mezue usoro ahụ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, njikarịcha na njedebe na-ekwe omume ugbu a, na-eji naanị otu ngwaahịa sọftụwia - akpọrọ CRO ụlọ. Ndị otu Freshmarketer nwere mmasị iche banyere ntụgharị dị ka usoro cyclical karịa usoro akara, ebe data sitere na weebụsaịtị na-enye nghọta, nke ị na-eji wuo echiche, nke ị na-eji dị ka ihe ndabere maka njikarịcha, nke n'aka nke na-enyekwu data - Na usoro ndị sochirinụ nke okirikiri na-eso.
Ihe omuma ohuru nke Freshmarketer di na ngwa mgbakwunye Chrome ya, yana ya na ntughari ihe niile. Ihe mgbakwunye Chrome mbụ nke ụlọ ọrụ ya emeela ka ọ dịrị ya mfe ịnwale ma bulie peeji ndenye ọpụpụ, nke na-enweghị njedebe. Omenala njikarịcha ngwaọrụ dị oke na ha chọrọ ndị ọrụ iji bulie ibe ha site na saịtị ọzọ. Nke a kpatara nsogbu nchekwa yana ọ pụtara na ngwaọrụ ndị a nwere nnukwu mmachi n'ihe ha nwere ike ime. Agbanyeghị, ndị otu Freshmarketer agabigala oke mmachi niile a. Conversionlọ ntụgharị mgbanwe ya niile na-agụnye Heatmaps, A / B Testing, na Funnel Analysis ọnụ.
Lee ụfọdụ ihe dị mma ị nwere ike iji Freshmarketer mee:
Na-ebuli ma nwalee ibe n'aka nri gị nchọgharị, na Ihe mgbakwunye Chrome nke Freshmarketer.
Lelee akụkọ data dị ndụ - Nghọta dịka na mgbe mkparịta ụka mere. Ọ dịghị ọzọ snapshots.
Jiri otutu ike Modulu CRO nwere naanị otu ngwaahịa.
Sochie clicks na ntanetị weebụsaịtị.
Hazie URL na-adị mfe, na di ntakiri enyemaka si gị tech otu.
na- agwakọta ngwọta mgbe ị na-agba ọsọ ọ bụla modulu. Gụnyere nyocha A / B na igwe eji arụ ọkụ.
Freshmarketer akwadoro njiri mara okirikiri usoro amalite na foneelu nyocha. Nchịkọta ọrụ bụ ebe a na-anwale otu peeji nke na-eje ozi dị ka ụzọ ntụgharị iji hụ ebe ndị ọbịa si na foneelu. Nke a na - enyere gị aka ịma etu ndị ọbịa si emekọrịta na nnukwu ọnọdụ ntụgharị.
Na-esote, ị na-aga n'ihu n'iji okpomoku, nke a na-ejikọta ya na nyocha. Heatmaps bụ ihe osise eserese nke mkpokọta peeji pịa data. Ha na egosiputara gi ihe ndi webusaiti n’eme nke oma, kedu akụkụ nke saiti gi choro idozi. Mgbe mmụta ebe ha dapụ, ị mụtara ya mere ha dapụ.
Ozugbo ịchọpụta ihe ndị na - esighi ike na ibe gị, ị nwere ike ịga n'ihu na nkwụsị ikpeazụ - nyocha A / B. Agbanyeghị, tupu ịmalite nyocha A / B, ọ ka mma ịmalite echiche siri ike iji nwalee. Potgha maka ule A / B kwesịrị ịdabere na nghọta sitere na nyocha mbụ gị. Nyocha A / B bụ ebe a na-eme mgbanwe na ibe, ma chekwaa dị ka iche. E kewara okporo ụzọ ndị ọbịa n'etiti ụdị dị iche iche a, yana nke nwere ntụgharị ka mma 'nwere mmeri'.
Ozugbo ị hapụrụ ụdị nke saịtị gị ka mma, ị ga-amalite usoro okirikiri ahụ ọzọ!
Anyị jiri Freshmarketer na ibe anyị na-edebanye aha, na-eme tweaks na ya dabere na nkwupụta ndị e mere na data anakọtara site na iji Freshmarketer, nke mere ka ntinye aka site na 26% n'ime ụbọchị atọ. Shihab Muhammed, BU Isi na Freshdesk.
Dabere na nyocha na nyocha nke ndị ọkachamara ụlọ ọrụ, njikarịcha ntụgharị mgbanwe dị njikere ịhụ nnukwu uto na afọ ndị na-abịanụ ka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-etinyekarị mkpa na CRO na mkpọsa ha. N'iburu otutu uzo, odi nfe, na ihe puru iche, Freshmarketer ka etinye ya nke oma iji weputa oganihu.
Freshmarketer na-anọchite anya mmụba evolushọn na usoro ụlọ ọrụ nwere ike isi bulie mgbanwe ma hụ omimi n'ime arụmọrụ saịtị. Tụlee ọganihu dị ala na ụlọ ọrụ anyị jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ egwu, nke si na ndekọ gaa CD, iPods, na n'ikpeazụ, gaa na egwu. Ihe mgbakwunye Chrome anyị bụ nzọụkwụ na-esote na CRO ma na-anọchite anya ọdịnihu nke ntụgharị mgbanwe ntụgharị, ekele maka mbọ anyị na-eme ka ọ ghara ịdị na-arụ ọrụ ma rụọ ọrụ nke ọma site na ijikọta modul mgbanwe dị iche iche. Anyị na-atụ anya ịkwado ngwa ngwa dị ka mkpa na mmefu ego maka mmụba ọnụego mgbanwe na-abawanye n'ụwa niile. E-azụmahịa na ụlọ ọrụ SaaS ga-achọpụta ozugbo uru dị na ịnwe otu ụlọ maka ikpo ọkụ na-ewe oge yana A / B na ule nnwale.
Gbalịa Freshmarketer n'efu
Tags: ule ulechrome ngwa mgbakwunyenjikarịcha ntụgharịntụgharị mgbanwe njikarịchacrocro ụlọonye na -ere ahịa ọhụrụoru ohurunyocha foneeluGoogle chromegoogle chrome ngwa mgbakwunyeokpomọkụ nkewamap ọkụikpo ọkụokpomokundụ data akukoakụkọ data dị ndụnjikarịchagbawara n'etiti URL uleakara clicksgafee
Anchor: Efu, Mfe, Ekwentị-Enyi na Enyi Podcasting